बम दिदिबहिनीले भनें : ‘हामी निर्दोष हौंं, दोषी प्रमाणित गरे जेल जान तयार छौं’ (भिडियोसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
प्रकाशित मिति : १४ माघ २०७५, सोमबार
‘नेपाल मानव अधिकार संगठनविरुद्ध अदालत जान्छौं’
काठमाडौं, १४ माघ । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार हत्या काण्डमा आफूहरुको कुनै संलग्नता नरहेको बम दिदिबहिनीले स्पष्ट पारेका छन् । उनीहरुले यो प्रकरणमा दोषी प्रमाणित गरे आफूहरु जस्तोसुकै सजाय पनि भोग्न तयार रहेको बताए ।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले आफूलाई मानव अधिकारकर्मी भन्नेहरुले चरित्र हत्या गर्नेगरि स्थलगत अध्ययन तथा अनुशन्धान नै नगरी गलत प्रतिवेदन बाहिर ल्याएको पनि आरोप लगाए । निर्मलाकी साथीसमेत रहेकी रोशनी बमले भनिन्,‘निर्मला मेरी साथी हुन् । यो प्रकरणमा मिडियाले पनि सत्य कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ ।’
प्रहरी अनुशन्धानले आफूहरुलाई दोषी सावित गरि नसकेको अवस्थामा असोज महिनातिर नेपाल मानव अधिकार संगठनको नामबाट चरित्र हत्या गर्नेगरि र आफूहरुलाई उक्त हत्याको मतियार भन्दै प्रतिवेदन बाहिर ल्याएको भन्दै उनले कडा आक्रोश पोखिन् ।
उनले भनिन्,‘नेपाल मानव अधिकार संगठनको नामबाट हाम्रो चरित्रहत्या गर्नेगरि र हामीलाई त्यस हत्याको मतियार भन्दै उक्त संगठनका अध्यक्ष ईन्द्र प्रसाद अर्याल, संस्थाका महासचिव महामुनीश्वर आचार्य र कञ्चनपुर जिल्ला अध्यक्ष त्रिभुवन भट्टले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे।’
अर्यालले आफूहरुसँग एक वचन पनि नसोधेको उनले जिकिर गरिन् । उनले भनिन्,‘न हामीलाई भेटे, न हाम्रा छिमेकीहरुलाई नै सोधे यसलाई कसरी प्रमाणित गर्छन् ? मेरी दिदी अहिलेसम्म त्यो होटेलमा गए नगएको उनीहरुले बुझ्न समेत चाहेनन् ।’
आफ्नो प्रतिवेदनमा दावी गरेको कुरालाई सार्वजनिक रुपमा पुष्टि गर्नु पर्ने नेपाल मानव अधिकार संगठन र यसका पदाधिकारी इन्द्र अर्याल, महामुनिश्वर आचार्य र त्रिभुवन भट्टको दायित्व रहेको उनको भनाई छ ।
रोशनीले भनिन्,‘उनीहरुको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि हामी वहिष्कृत, अपमानित र नारकीय सामाजिक जीवन विताउन वाध्य भएका छौं । हाम्रो पढाई छुटेको छ, सामाजिक वेइज्जति भएको छ । आफन्त र विद्यालयका साथीहरुले हामीलाई अपराधी र अनैतिक चरित्रका मानिसका रुपमा हेर्ने गर्न थालेको छन। उक्त झुटो प्रतिवदेनले गर्दा हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पारेको क्षतिको क्षतिपूर्ति हुनुपर्छ । उनीहरुको प्रतिवेदनले गर्दा हामीमाथी परेको शारिरिक, मानसिक र सामाजिक क्षतिको क्षति पूर्ति दिलाइ दिन आम सञ्चार माध्यम, पत्रकार दाजुदिदी, मानव अधिकारकर्मी, महिला अधिकारकर्मी र बालअधिकारकर्मीहरु समक्ष हार्दीक अनुरोध गर्दछु ।’
पत्रकारले उक्त दिन निर्मला तपाईको घरमा आउँदा के–के कुरा भयो ? त्यो दिनको बारेमा केही बताईदिनुहोस भनेर सोधेपछि रोशनीले भनिन्,‘त्यो दिन निर्मला मेरो घरमा आएकी थिई । होमवर्क गरेर फर्किएकी थिई । उ आउँदा हातमा ग्रिज लागेको थियो । सावुन पानीले धो भनें । अनि हामीबीच पढाईसम्बन्धी कुरा भयो ।’
तर, प्रहरीले घट्नामा आफूहरुको संलग्नता पुष्टि हुने कुनै तथ्य फेला नपरेको भन्दै छोडे पनि समाज, राष्ट्रिय मिडिया र सामाजिक सञ्जालले आफूहरुलाई अपराधीको रुपमा चित्रित गर्न नछोडेको उनको गुनासो छ ।
अनुशन्धानको लागि काठमाडौंबाट अहिलेसम्म प्रहरीको ७ टोली कञ्चनपुर गैसकेको सुनाउँदै उनले आफूहरु दोषी भएको भए प्रहरीले किन प्रमाणित नगरेको त भन्दै प्रश्न गरिन् ।
कार्यक्रममा दिदी बबिता बमले आफूहरु दोषी प्रमाणित भए जेल जान तयार रहेको बताईन् । उनले थपिन्,‘दोषी को हो भनेर राज्यले छानबिन गर्ने हो । यो सरकारको काम हो । ईन्द्रप्रसाद अर्यालले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेका सबै कुरा झुटो छन् । उनले झुटो कुरा लेखेर हाम्रो बद्नाम गरे । एउटा कुरा पनि सत्य छैन । यदि उनले लेखेको कुरा प्रमाणित भए हामी जेल जान तयार छौं ।’
साँचो कुरा के हो ? त भनेर पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा उनले भनिन्,‘कञ्चनपुरमा गएर सोध्नुहोस । छरछिमेकलाई थाहा हुन्छ ।’ आफूले निर्मला पन्तलाई राम्रोसँग नचिनेको पनि उनले स्पष्ट पारिन् । उनले भनिन्,‘निर्मला हाम्रो घरमा एक/दुई चोटी आएकी हुन् । तर, म राम्रोसँग चिन्दिन् ।’
कार्यक्रममा सामाजिक अभियन्ता सावित्री सुवेदीले बम दिदिबहीनीहरुलाई मानव अधिकारवादीहरुले यो प्रकरणमा मुछेर चरित्र हत्या गर्न खोजेको भन्दै सत्य, तथ्य छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिन् । उनले भनिन्,‘मानव अधिकारकर्मीहरुले जिउँदा निर्मला बम दिदि बहिनीलाई न्याय दिनुपर्छ ।’
यस्तो छ बम दिदी बहिनी र आमाको नाममा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ती
म महेन्द्रनगर भीमदत्त न.पा. वडा नम्बर १८ निवासी १४ वर्षीया रोशनी बम हुँ । स्कूलमा कक्षा ९ मा मसँगै अध्यनरत मेरी साथी निर्मला पन्तको हत्या भएछ । उनको शब २०७५ साल साउन ११ गते भेटिनु भन्दा अघिल्लो दिन साउन १० गते निर्मला मेरो घरमा आएर मसँगै हामवर्क गरिन् । अनि अन्दाजी सवा २ बजे तिर मेरो घरबाट फर्केकी थिइन् । सवा ११ बजे मेरो घरमा आएकी निर्मला अन्दाजी सवा २ बजे फर्केकी थिइन् । निर्मला फर्केपछि मेरो छिमेकमा बस्ने देवकी भट्टकी छोरी ८ वर्षीया बालिका कृतिका भट्ट मेरो घरमा आएकी थिइन् । उनी मेरो घरमा टिभीमा बजेको गितमा नाच्दै बसेकी थिइन् । निर्मला निस्केपछि म लामो समय कृतिकालाई खेलाएरै बसेकी थिएँ । मेरी दिदी बविता भने स्नातक तहको परीक्षा तयारीका लागि साँझको ट्युसन पढ्न गएकी थिइन् । यसरी साँझसम्मै कृतिका मेरै घरमा रहेपछि कृतिकाकी आमा देवकी भट्ट कृतिकालाई लिन अन्दाजी साँझ ७ बजेतिर आउनुभयो । उहाँ पनि एकछिन् कृतिका नाचेको हेरेर बस्नुभयो । त्यसैबेला मेरी दिदी बविता पनि ट्युसन पढेर आइ पुगिन् । कृतिकाकी आमा आउनु भन्दा अगाडि बाटोको छेउमा रहेको अम्बाको रुखमा अम्बा खान छिमेकी देवकी बम, राजमति पाल, विमला भट्ट पनि मेरो घरमा आएर फर्किनु भएको थियो ।
दोस्रो दिन बिहान पहिले प्रहरी आएर सोधपुछ गर्योे, त्यसपछि निर्मलाकी आमा आउनुभयो । उहाँहरुले मेरो घरको भित्रैसम्म गएर हेर्नुभयो र फर्किनु भयो । उहाँसँग ४÷५ जना सँगै हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि सादा पोशाकमा प्रहरी आए र मेरो घर खानतलासी गरे । फेरि निर्मलाकी आमा १४÷१५ जनाको समुह लिएर आउनु भयो । त्यसबेला म घरमा एक्लै थिएँ । त्यसबेला आएको समुहका एकजना अंकलले मलाई ठुलो स्वरमा सोध्नुभयो– तिमीले निर्मलालाई किन लिएर आयौ? मैले भनेँ– मैले ल्याएको होइन, निर्मला आफैं आएकी हो । उहाँले फेरि दवाव दिदैं भन्नुभयो– तिमी मैले ल्याएको हुँ भनेर स्वीकार गर, नत्र राम्रो हुँदैन । त्यसबेला म एक्लै थिएँ, त्यस अंकलले यसरी गाली गरे पछि म रोए। त्यहाँ हल्लाखल्ला भएपछि मेरा छिमेकी पनि आए । उनीहरुले यो बच्ची हो यसलाई हप्काइदप्काइ गरेर नसोध्नु भने । त्यसबेला कलेजबाट दिदी पनि आइपुगिन् । दिदीले निर्मलालाई रोशनीले लिएर आएको होइन, ऊ आफैं आएकी हो, किन हप्कीदप्की गर्नुहुन्छ भन्दा ती अंकलले तिमी बीचमा नबोल, बोलेमा चुल्ठो समातेर जिप्रका लैजान्छु भने ।
हाम्रो घरबाट साउन १० गते निर्मला पन्त हिंडेको केहि समय पछि नै निर्मलाको साइकल देखेको धना भण्डारी, उहाँका जेठानी र छोरा सन्दिप भण्डारीले प्रहरीसँगको वयानमै वताएका छन् । उनीहरुले निर्मला हाम्रो घरबाट साइकलमा निस्केको २ घन्टापछि नै देखेका छन् भने निर्मला हाम्रो घरबाट कसरी हराएको भन्न मिल्छ ? यो तथ्यल बाहिर किन आएन ? भोलिपल्ट जुन ठाउँमा निर्मलाको शब भेटिएको थियो, त्यहि ठाउँ नजिक अघिल्लै दिन निर्मलाको साइकल भेटिनुले उनी हाम्रो घरबाट गइसकेको पुष्टि हुँदैन र ? तर, यो तथ्यलाई सञ्चार माध्यमले कहिल्यै छापेन । मेरो घरबाट निर्मला हराएको प्रचार गरिरहे । उनिहरुले यस्तो किन गरे खोजिदिन सबै समक्ष अनुरोध गर्दछु ।
आफ्नो प्रतिवेदनमा दावी गरेको कुरालाई सार्वजनिक रुपमा पुष्टि गर्नु पर्ने नेपाल मानव अधिकार संगठन र यसका पदाधिकारी इन्द्र अर्याल, महामुनिश्वर आचार्य र त्रिभुवन भट्टको दायित्व हो । उनीहरुको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि हामी वहिष्कृत, अपमानित र नारकीय सामाजिक जीवन विताउन वाध्य भएका छौं । हाम्रो पढाई छुटेको छ, सामाजिक वेइज्जति भएको छ । आफन्त र विद्यालयका साथीहरु हामीलाई अपराधी र अनैतिक चरित्रका मानिसका रुपमा हेर्ने गर्न थालेको छन। उक्त झुटो प्रतिवदेनले गर्दा हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पारेको क्षतिको क्षतिपूर्ति हुनुपर्छ । उनीहरुको प्रतिवेदनले गर्दा हामीमाथी परेको शारिरिक, मानसिक र सामाजिक क्षतिको क्षति पूर्ति दिलाइ दिन आम सञ्चार माध्यम, पत्रकार दाजुदिदी, मानव अधिकारकर्मी, महिला अधिकारकर्मी र बालअधिकारकर्मीहरु समक्ष हार्दीक अनुरोध गर्दछु ।
यतिबेला मलाई एकातिर आफ्नो साथी गुमाउँदाको पीडा छ भने, अर्कोतर्फ म र मेरो परिवारका सदस्य सामाजिक रुपमा वहिष्कृत, अपमानित र नारकीय जीवन विताउन वाध्य भएका छौं । म र मेरो परिवारका सदस्य घर बाहिर जाने अवस्था छैन, हामी आफ्नै घर भित्रै नजर बन्दको अवस्थामा छौं । प्रहरीको लामो अनुसन्धानले मलाई र मेरो परिवारका सदस्यलाई उक्त घटनामा अहिलेसम्म दोषी प्रमाणित गर्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा केहि अधिकारकर्मी, सञ्चार माध्यमहरुले हामीलाई अपराधीको रुपमा चित्रण गरि रहेको छ । म अधिकारकर्मी र आम सन्चार माध्यमलाई मेरा छिमेकीहरुसँग पनि बुझी उक्त घटनाको बारेमा वास्तविकता बाहिर ल्याइ म, दिदी लगायत निर्मला समेतको न्याय लागि लडि दिनु म अपिल गर्दछु ।
दिदी– बबिता बम
आमा– इन्द्रा बम